Fanesorana mpitandrina: nisavorovoro ny FJKM Analakely | NewsMada
Fanesorana mpitandrina: nisavorovoro ny FJKM Analakely
Par Taratra sur 08/10/2018
Tsy mbola nifarana na efa naharitra ela aza. Nisavorovo ny ao amin’ny FJKM Analakely, omaly, tamin’ny fahatongavan’ny prezida synaodaly hamaky ny fampitsaharana ny mpitandrina amin’ny asany. Nisy ny fanakanana azy ireo tao amin’ny trano fisainana.
Vao maraina, efa nandeha ny feo tao amin’ny fiangonana FJKM Analakely fa ho tonga ao an-toerana ny prezida synaodaly, hitondra taratasy fampitsaharana ny pasitera amin’ny asany ao an-toerana. Tsy nitranga anefa izany tamin’ny fidirana voalohany, na efa samy hendratrendratra aza ny olona. Tamin’ny fidirana faharoa, tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro, no tonga ny prezida synaodaly niaraka tamin’ny mpihevi-draharaha amin’ny synaodam-paritany efatra, vadintany roa ary polisy telo nikasa hanatanteraka didy.
Tsy tafakatra ny alitara anefa ireo olona ireo, izay saika hanapaka ny fotoam-pivavahana, fa efa nandrasan’ny solontenam-piangonana tao amin’ny trano fisainana. Nisy ny fifamaliana teo amin’ny roa tonta, raha ny vaovao teny an-toerana. Tsy nahovoka ireo solontenam-piangonana ry zareo avy amin’ny synaodam-paritany ka niala moramora.
Voalaza kosa anefa fa hihatra amin’ny 28 oktobra ho avy izao ny didy fampitsaharana ny mpitandrina ankehitriny amin’ny asany. Marihina fa efa nisy ny fifidianana nataon’ny mpihevi-draharaham-piangonana sy mpandray, 9 septambra lasa teo ka 468 ny olona nanao izany. 11 tamin’ireo ny mpitory ny mpitandrina. Nilamina ihany ny raharaha omaly.
Hihaona amin’ny filohan’ny FJKM
Nisy ny fivoriana maika tao amin’ny FJKM Analakely, omaly hariva, nandinihana ity olana ity. Araka ny nambaran’ireo mpivory, hisy tsy ho ela ny fihaonana hataon’ny fiangonana amin’ny filohan’ny FJKM.
Miandry izay ho tohiny ny mpivavaka ao an-toerana satria nisy nilaza fa raha tafakatra teny amin’ny alitara ny prezida synaodaly namaky ny taratasy fanalana ny mpitandrina, mety ho ratsy ny raharaha. “Efa nisy mihitsy ny fiantsoana ireo mpivavaka tamin’ny fidirana voalohany mba hiverina hiaro ny mpitandrina”, hoy ny fanazavana.
Toe-draharaha mety tsy ho voafehy ny tahaka izao raha misy ny pitik’afo kely mety handrehitra ny iray manontolo. Efa naharitra ihany ny tao amin’ny FJKM Analakely, saingy tsy mety miravona. Mandeha aza ny resaky ny mpiangona fa misy fanerena sy vola any ambadika any. Ny avy amin’ny foiben’ny FJKM kosa, tsy azo an-telefaonina raha nangatahina fanazavana momba ity raharaha ity. Samy miandry ny tohiny ny rehetra.
Une réponse à "Fanesorana mpitandrina: nisavorovoro ny FJKM Analakely"
Mandimby 08/10/2018 à 16:53
Mampalahelo ny toe-javatra fa ny azo inoana dia tafiditrin’ny politika hatrany ny Fiangonana ka io ilay toetra manahirana @ malagasy sasany tia fahefana ary tsy mahay miheno ny vahoaka foana rehefa misy tranga toy izany.